Dowladda Ingriiska oo tababar u soo xirtay cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Ingriiska oo tababar u soo xirtay cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka
Saraakiil u dhashay Ingiriiska ayaa tababar u soo xiray 500 oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaanada Koofur Galbeed.
BAYDHABO, Soomaaliya - Dufcadii ugu dambeysay oo tiradoodu ahayd 113 askari ayaa loo soo gabagabeeyay tababarkooda iyadoo xaflad qalin jabin ah loogu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay.
Tababarkan oo socday muddo Siddeed toddobaad ah ayaa lagu diyaariyay saraakiil iyo askar ka tirsan Xoogga Dalka Soomaaliyeed (SNA).
26- Tababare oo Ingiriiska u dhashay kana socday Guutada 2aad ee Princess of Wales’s Royal Regiment ayaa bixiyay cashiro lagu baranayo xirfado ay ka mid yihiin Calaamadeynta (Shiish-ka), Kormeerka, Gargaarka dag-dagga ah iyo sida loo furfuro loogana hor tago aaladaha qarxa.
Qeybtaan ayaa ah dufcaddi shanaad oo Ingriiska tababaro tan iyo markii koorsooyinkan laga bilaabay dalka bishii Sebtember 2019.
Sidoo kale Boqortooyada Ingiriiska waxay siisay ciidanka XDS gaadiid dagaal waxayna dhistay xero Ciidan oo cusub oo laga hirgaliyay magaalada Baydhabo oo qaadi karta 450 askari.
Wasiirka ciidamada qalabka sida James Heappey wuxuu yiri: “Talaabadan ayaa muujineysa sida ay Britain uga go’an tahay inay ka caawiso Soomaaliya, Boqortooyada Ingiriiska iyo ciidamadeena qalabka sida waxay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya, iyadoo qorshuhu yahay in la laba jibaaro tirada ciidamada lagu tababaray qorshahan sanadka 2021-ka.
In kabadan 1,750 Saraakiil iyo askar isugu jirta ayaa ka qeyb galay koorsooyinkan kala duwan ee Baydhabo lagu soo gabagabeeyay.